Avid သည်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ProRes RAW နှင့် DNx Codecs ဖြင့်ပို့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » avid ProRes RAW နဲ့ DNx codec ဖြင့် Video တည်းဖြတ် Workflows ဘဝမှကယျတငျ
avid ProRes RAW နဲ့ DNx codec ဖြင့် Video တည်းဖြတ် Workflows ဘဝမှကယျတငျ
ProRes Windows အတွက်ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ProRes RAW များအတွက်ဇာတိထောက်ခံမှုမီဒီယာ Composer ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အဘို့ဇာတိထောက်ခံမှုနှင့်အတူအဆုံးမှအဆုံးသို့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် Workflows တိုးတက်ကောင်းမွန် DNx ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ
ဘာလင်တန်, Mass ။ စက်တင်ဘာ 13, 2019 - လွန်စွာလိုလားသော® (Nasdaq: avid) ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် မီဒီယာ Composer® Apple ရဲ့ ProRes RAW ကင်မရာ codec နှင့် Windows ပေါ်မှာ ProRes ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် encoding ကထောက်ခံဘို့ဇာတိထောက်ခံမှုကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် Apple ကအားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့ download အဖြစ် Apple ကကနေရရှိနိုင်ကြောင်း Pro ကိုဗီဒီယို Formats အထုပ်အတွင်း DNxHR နှင့် DNxHD ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများများအတွက် 64-bit မှာဒီကုဒ်ဒါပေးပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားပေါင်းစည်းမှုအကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများမှပြုလုပ်ရန်မသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့ OS ကို၏အရည်အသွေးမြင့် ProRes အကြောင်းအရာဖန်တီးနှင့်ဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအချိန်ကုန်သက်သာခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ProRes ပရီမီယံကို real-time တည်းဖြတ်ရေးများအတွက် multistream, အရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်တွေနဲ့အနိမ့်ရှုပ်ထွေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း high-performance ကိုတည်းဖြတ် codec ဖြစ်ပါတယ်။ Window များပေါ်တွင်မီဒီယာ Composer အသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့် codec, SD ကကနေအထိဘောင်အရွယ်အစားကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် HD 2K, 4K ရန်နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လျှော့ချသိုလှောင်မှုနှုန်းထားများနှင့်အတူအပြည့်အဝ resolution ကိုအနည်းဆုံးကျော်လွန်ပြီး။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, လုံးဝ 2019 များအတွက်ဒီဇိုင်းခဲ့သော MacOS နဲ့ Windows များအတွက်မီဒီယာ Composer, ကိုလည်း ProRes RAW များအတွက်ဇာတိထောက်ခံမှု add ပါလိမ့်မယ်။ ProRes RAW ဒီနေ့ရဲ့အမြင့်ဆုံး-resolution ကိုလက်ငင်းတည်းဖြတ်များအတွက် ProRes ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ RAW ကိုဗီဒီယို၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးမယ့်ကင်မရာ sensor ကနေကုန်ကြမ်းဒေတာမှ ProRes ချုံ့သက်ဆိုင်ပါသည်။
၏နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆက်လက်ရရှိနိုင်မှု လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို MacOS များအတွက် DNxHD နှင့် DNxHR ဒီကုဒ်ဒါ Apple ကကို အသုံးပြု. အကြောင်းအရာဖန်တီးသူတစ်ဦးကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးသည်နှင့် လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်ကုန်များနှင့် MXF နှင့် QuickTime ဖိုင်တွေအတွက် encoded အကြောင်းအရာဖန်တီးသူ '' DNx ပစ္စည်းများ၏အသက်ရှည်သေချာပါလိမ့်မယ်။
"ဒီပူးပေါင်းကွဲပြားခြားနားသော operating system မြားကအန္တရာယ်နယ်နိမိတ်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု democratizes နှင့်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးပေးပို့ပုံစံများ၏ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်" ရော့က D'Amico, ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်၏ဒါရိုက်တာမှာကပြောပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော။ "အယ်ဒီတာများဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်းပြောပြအပေါ်အာရုံစိုက်နေဖို့နိုင်အောင် Windows အတွက် ProRes အထောက်အပံ့ထည့်သွင်းခြင်း, ဇာတိ ProRes RAW နဲ့ DNx codec သေးနည်းပညာတိုးတက်မှုနဲ့အတူမီဒီယာ Composer အပေးအယူအခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "
မီဒီယာ Composer 2019 အပြည့်အဝ features တွေအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, ခရီးစဉ်ကို www.avid.com/media-composer သို့မဟုတ်မီဒီယာ Composer 2019 မှာတစ်သရုပ်ပြတွေ့မြင် IBC 2019.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ပေါင်းစည်းမှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows သိုလှောင်ခြင်း စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် 2019-09-13
ယခင်: EditShare အကယ်ဒမီသင်တန်းနှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Programs ကို Authorized နယူးနှင့်အတူရှေ့ကိုမီဒီယာပညာရှင်များစေ့ဆျော
နောက်တစ်ခု: IBC 12 မှာ Aja မိတ်ဆက် HDR Image ကို Analyzer 2019G